सर्वोत्कृष्ट संस्थागत सुशासन भएको विकास बैङ्क बन्छौं | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता सर्वोत्कृष्ट संस्थागत सुशासन भएको विकास बैङ्क बन्छौं
on: May 17, 2018 अन्तरवार्ता
नाम नयाँ तर संस्था पुरानै भएको गण्डकी विकास बैङ्क २०६६ सालदेखि काठमाडौंमा सञ्चालनमा छ । स्थापनाकालदेखि (२०६० वैशाख १७)नै प्रधान कार्यालय पोखरामा रहेको राष्ट्रियस्तरको फाइनान्स कम्पनीको रूपमा फेवा फाइनान्सले कारोबार शुरू गरेको थियो । फेवा फाइनान्स र १० जिल्ले विश्व विकास बैङ्क मर्ज भई २०७२ असार २८ गते फेवा विकास बैङ्कको नामबाट कारोबार शुरू भएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिअनुरूप २०७५ असार मसान्तसम्ममा २ अर्ब ५० करोड चुक्तापूँजी पुर्‍याउनुपर्ने भएपछि फेवा बैङ्क क्षेत्रीयस्तरको गण्डकी विकास बैङ्कसँग मर्ज भई २०७४ असार २१ देखि संयुक्त रूपमा सञ्चालनमा छ । प्रस्तुत छ, बैङ्कको हालसम्मको यात्रा, योजनालगायत विषयमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेशमबहादुर थापाससँग आर्थिक अभियानका ममता थापाले गरेको कुराकानी :
तीनओटा बैङ्क गाभिएपछिको एकीकृत कारोबार कत्तिको सहज रह्यो ?
तीनओटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको मर्जपछि एकीकृत कारोेबार भएको हो । २०७४ असार २१ गतेदेखि गण्डकी विकास बैङ्कको नामबाट कारोबार शुरू गरिएको थियो । प्रबन्धपत्र र नियमावलीअनुसार गण्डकीचाहिँ फेवा विकास बैङ्कसँग मर्जर भएको तर नाम गण्डकी भएकाले सर्वसाधारणमा फेवा गण्डकीमा मर्ज भएको भन्ने बुझाइ छ । साविकको फेवा फाइनान्स र विश्व विकास बैङ्क भएर बनेको फेवा विकास बैङ्क हुँदा अत्यन्त राम्रो र सिनर्जी इफेक्ट भएको थियो । अहिले गण्डकी र फेवा विकास बैङ्क मर्जर भएको आगामी असार २० गते १ वर्ष पुग्छ । मर्जपछिको करीब १० महीनामा समस्या र विवादविना सञ्चालन भएको छ । यसले पनि अर्को सिनर्जी प्राप्त गर्दछ । मर्ज भएका तीनओटै वित्तीय संस्थाको प्रधान कार्यालय पोखरा भएकाले सञ्चालक, प्रोमोटरलगायतको सामीप्य थियो । यिनीहरूको कर्जा लगानी र पूँजीमा त्यति धेरै अन्तर थिएन । व्यवसाय, पूँजी, शाखा सञ्जाल र कर्मचारी पनि राम्रो भएकाले सिनर्जी इफेक्ट देखिएको हो ।
तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदनअनुसार बैङ्कको चुक्तापूँजी २ अर्ब ३० करोड छ । अझै राष्ट्र बैङ्कले तोकेअनुसारको चुक्तापूँजी पुर्‍याउन करीब २० करोड बाँकी देखिन्छ । अब कसरी पुर्‍याउने योजना छ ?
आगामी जेठ २५ गते बैङ्कको साधारणसभा हुँदै छ । हामीले हालको चुक्तापूँजीको १९ दशमलव ३१०६ प्रतिशत बोनस शेयर घोषणा गरिसकेका छौं । राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृति पनि भइसकेको छ । जेठ २५ गते हुने साधारणसभाले बोनस शेयर जारी गर्नेछ । यसपछि बैङ्कको चुक्तापूँजी रू. २ अर्ब ७५ करोड हुन्छ ।
बैङ्कले न्यून आय भएका उद्यमीलाई विपन्न वर्ग कर्जा तथा समूहमा आबद्घलाई लघु वित्त कर्जा पनि दिँदै आएको छ । यो कत्तिको प्रभावकारी भएको छ । यस्तो कर्जा वार्षिक कति प्रवाह हुने गरेको छ र जोखीम भार कस्तो छ ?
केन्द्रीय बैङ्कले साढे ४ प्रतिशत विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएअनुसार अलिकति बढी कर्जा प्रवाह गरेका छौं । धितोमा बाहेक सामूहिक जमानीमा यस्तो कर्जा प्रवाह गरेका छौं । यसले केही हदसम्म राम्रो भएको छ । राम्रो हुँदाहुँदै पनि यसमा दोहोरिने समस्या बढी छ । सबै बैङ्कबाट यस्ता प्रकृतिको कर्जा कसका कति छन् र सो कर्जा सदुपयोग भएको छ/छैन, हेर्न सकिएको भए शायद दोहोरिने समस्या आउँदैनथ्यो । साथै, यस्ता व्यक्तिलाई बुझाउन नसकेर हो कि भनेर यसबारे चनाखो भएका छौं । एउटै व्यक्तिले ३/४ ठाउँबाट लिनु पनि गल्ती होइन र बैङ्कहरूले दिनु पनि गल्ती होइन । तर, सो रकम ऋणीले जेका लागि लिएको हो, त्यसमा सदुपयोग नगर्ने समस्या छ । अब हामीले क्षेत्रगत बैङ्क र त्यसमा क–कसले ऋण लिएको छ भन्नेबारे अध्ययन गर्नेछौं । सामूहिक जमानीमा जोखीम न्यून छ तर समग्रमा केही खराब कर्जा हुने सम्भावना छ । विपन्न नागरिकले आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नबाहेक अन्य काममा पैसाको महत्व नबुझेको र लगानी गर्ने ज्ञान नभएकाले पनि समस्या देखिएको छ ।
अघिल्लो वर्ष चैत मसान्तसम्ममा १ दशमलव १४ प्रतिशत रहेको बैङ्कको निष्क्रिय कर्जा अहिले घटेर शून्य दशमलव ८४ प्रतिशत छ । १ वर्षमै यस्तो कर्जा उठाउन कसरी सफल हुनुभयो ?
यो कर्जा उठाउन सफल हुनुको कारण हामीले कर्जा लगानी गर्नुअघि ग्राहक र प्रोजेक्टको विश्लेषण गरेकाले हो । आवको अन्त्यतिर भने पेनाल्टी तिर्नुपर्ने डरले पनि ग्राहकले कर्जा तिर्ने गर्छन् । अहिलेका ऋणीहरू सज्जन परेका छन् । यसअघिका ऋणी पनि नराम्रा होइनन् । तर, कुनैबेला क्यास फ्लो कम हुँदा खराब कर्जा हुने गरेको हो । यस वर्ष उक्त कर्जा घटाएका सबै ग्राहकलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
बैङ्कको शाखा विस्तार, सेवा सुविधा, नाफा, कर्जा, निक्षेपलगायत स्थिति कस्तो छ ?
हालसम्म गण्डकी विकास बैङ्कका ५९ ओटा शाखा छन् । दुर्गम जिल्ला मानिने ताप्लेजुङमा पनि गण्डकी विकास बैङ्कले शाखा खोलेको छ । त्यसमध्ये काठमाडौंमा मात्र पाँचओटा शाखा छन् । साथै, अब काठमाडौं उपत्यका र बाहिर गरेर १८ ओटा शाखा स्थापना गर्दै छौं । तीमध्ये तीनओटा शाखा काठमाडौंको कुलेश्वर, ललितपुरको इमाडोल र भक्तपुरको सुकुलढोकामा स्थापना हुँदै छन् । त्यसपछि बैङ्कका ७७ ओटा शाखा पुग्नेछन्, जुन विकास बैङ्कको क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै शाखा हुनेमध्ये हामी पर्छौं ।
बैङ्कले कस्ता निक्षेप तथा कर्जा योजना ल्याएको छ ?
हामीले बचत खातामा ७ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याज दिएका छौं । यस्तै, मुद्दती खातामा १२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएका छौं । साथै, कर्जामा १६ प्रतिशत र माइक्रो क्रेडिटमा १७ प्रतिशतसम्म ब्याज तोकेका छौं ।
बैङ्कको एबीबीएस, एटीएम, मोबाइल बैङ्किङ, रेमिट्यान्स सेवासहितको पूर्ण बैङ्किङ सेवा सञ्चालनको प्रभावकारिता कस्तो छ ?
बैङ्कले दिने गरेको सबै सेवा प्रभावकारी भएको हाम्रो अनुमान छ । हालसम्म बैङ्कले २० ओटा एटीमबाट ग्राहकलाई सुविधा दिइरहेको छ । यस्तै, हामीले एबीबीएसको सुविधा पनि दिएका छौं । सी–आस्बाको पनि व्यवस्था छ । यसबाहेक डिपोजिट, कर्जा, नागरिक बचतदेखि शेयर होल्डरसम्म सेवा पुग्नेगरी हरेक किसिमका सुविधा ल्याएका छौं ।
कमर्शियल बैङ्कहरूको तुलनामा तपाईंहरूको निक्षेप ब्याजदर बढी छ । कमर्शियल बैङ्कले निक्षेपमा ११ प्रतिशतको क्याप लगाएका छन् । तपाईंहरूले १२ प्रतिशत ब्याज दिँ दा त आकर्षण बढेको छ होला नि ?
निक्षेपकर्ताको आकर्षण विगतदेखि नै राम्रो छ । हाम्रो उद्देश्यअनुरूप नै निक्षेपकर्ताको सङ्ख्या बढेको छ । नेपालमा माघदेखि रेमिट्यान्स घट्दो क्रममा छ । विकास निर्माणका कार्य नहुँदा पूँजीगत खर्च पनि कम देखिन्छ । यस्ता विविध कारणले गत माघपछि अपेक्षा गरेअनुसार निक्षेपकर्ताको वृद्धि भएको छैन । निक्षेपमा वृद्धि नहुँदा अहिले ब्याजदर बढ्दै गएको छ । ब्याजदर बढ्दा निक्षेपकर्ता मात्र राम्रो हुन्छ । बैङ्क उनीहरूको मात्र पाटो होइन । यसले व्यवसायी, लगानीकर्ता र उद्यमीलाई अप्ठ्यारोमा धकेल्छ । अहिले ब्याजदर बढेको छ । ठूलो पूँजी लिएर काम गर्दा पनि गाह्रो हुन सक्छ । त्यसकारण सन्तुलित रूपमा एउटा लेभलको इन्फ्लेशन रेटमा निक्षेप ब्याजदर हुनुपर्छ । यद्यपि, प्रिमियम जोडेर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो अपरेशन कष्टदेखि समग्रमा मूल्य निर्धारण गरी सीमित केही फाइदा कमाउन पाउनपर्छ । साथै, ऋणीहरूले उद्यमशीलतालाई अगाडि बढाउन सक्ने वातावरण भयो भने पनि यो देश समृद्धितर्फ उन्मुख हुन्छ ।
चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार बैङ्कको सुधारको गति आशालाग्दो देखिन्छ, कारण के होला ?
पछिल्लो त्रैमासिक विवरणअनुसार निक्षेपमा एक लेभलको वृद्धि भएको छ । तर, अपेक्षा गरेअनुसार भने भएन । यस्तै, गत त्रैमासको तुलनामा कर्जामा भने राम्रो वृद्धि भएको थियो । जति अप्ठ्यारो परे पनि निक्षेप कर्जा बढ्दो क्रममा छ । साथै, तेस्रो त्रैमासिकसम्ममा बैङ्क ३४ करोड ४ लाख खुद मुनाफा कमाउन सफल भएको छ । विकास बैङ्कहरूले प्रकाशित गरेको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार हामी तेस्रो स्थानमा छौं । बचत, निक्षेपकर्ता सबै गरेर ग्राहक सङ्ख्यासमेत करीब २ लाख ३१ हजार पुगेको छ ।
यो बैङ्क अब ७७ ओटा शाखामार्फत गाउँ–गाउँमा पुग्दै छ । अहिलेसम्म पुगेका क्षेत्रमा सर्वसाधारण वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कत्तिको सचेत छन् ?
हामी हरेक शाखामार्फत विद्यालयलगायत सार्वजनिक स्थानमा गएर वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम गरिरहेका छौं । यो क्रम बढ्दो छ । सबै बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट पनि भएको छ । अब यस्तो काम जनप्रतिनिधिबाट पनि हुनुपर्छ । सर्वसाधारणले बैङ्क खातामा बचत किन गर्ने भनेर महत्त्व बुझ्न जरुरी छ । सानो बचत बैङ्कमा एकमुष्ट सङ्कलन हुँदा ठूला परियोजनामा लगानी हुन्छ । यसैले व्यवसाय, रोजगारी सृजना हुन्छ ।
राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको बैङ्किङ सुशासन कमजोर भएको टिप्पणी गरेको छ । बैङ्कहरूको स्थिति कस्तो पाउनुभएको छ ?
नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा पारदर्शी भएको संस्था बैङ्क हो । हामी आफ्नो सुशासनमा आफै बस्ने हो । बसेका छौं । अरू क्षेत्रमा कस्ता ठूलाठूला घटना भएका छन् । तर, यो क्षेत्रका हरेक कुरा छिट्टै थाहा पाइन्छ । बैङ्कमा इण्टरनल तथा स्ट्याचुटरी लेखा परीक्षण हुन्छ । कतिपयले कङ्क्रिट अडिट गरेका हुन्छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अनसाइट र अफसाइट सुपरीवेक्षणले काम गरिरहेको हुन्छ । कुनै बैङ्कमा शङ्का लागेमा विशेष सुपरीवेक्षण हुन्छ । बैङ्कहरूमा फ्रड हुने स्थिति कम हुँदै आएको छ । बैङ्कहरूमा पहिले क्रेडिट रिस्क थियो, अहिले अप्रेशन रिस्क छ । शाखाहरू आक्रामक तरीकाले विस्तार भइरहेका छन् र बजारमा पर्याप्त मानव व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ । यसैकारण अप्रेशन रिस्कलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेका छौं । हामी सुशासनमा बस्नुपर्छ ।
बैङ्कको अबको कार्ययोजना के छ ?
हामी पूँजी, शाखा सञ्जाल र नाफाको दृष्टिले अगाडि छौं । नाफा आउँदा सरकारलाई तिर्ने करमा वृद्धि हुन जान्छ, जसले गर्दा देशको समृद्धिमा सहयोग पुगेको छ । शुरूमा त हामीले शाखा सञ्जाल विस्तारलाई पूर्णता दिन्छौं । शाखा खोल्नु ठूलो कुरा होइन, त्यो किन खोलिएको भन्नेबारे काम भएमा मात्र सार्थक हुन्छ । हामी आउँदा वर्षहरूमा आक्रामक तरीकाले शाखा खोल्दैनौं । अहिले भने भर्खर मर्जर भयो, केही अधिकार पनि पाइयो र पूँजी पनि ठूलो भएकाले शाखा विस्तार गरेका हौं । अब हामीले सबै विकास बैङ्कमध्येकै सर्वोत्कृष्ट संस्थागत सुशासन बैङ्क बन्ने रणनीति बनाएर अघि बढाएका छौं । यस्तै, स्टक होल्डरलाई अपेक्षाअनुसार प्रतिफल दिन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएका छौं । समाजमा समेत यो बैङ्कले नाफा मात्र कमाउँदैन, सामाजिक काममा समेत सहभागी छ भन्ने छाप छोड्नेछौं । हामीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)को भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छौं । राज्यको समृद्धिका लागि पर्याप्त पूँजी लगानी गरेर हरेक उद्योगी तथा व्यवसायीले धेरै कर तिर्न सक्ने क्षमता राख्नेतर्फ प्रोत्साहित गर्नेछौं । बैङ्क स्थापना गर्ने प्रमोटर र सर्वसाधारण शेयर होल्डरलाई भने अधिकतम प्रतिफल दिने रणनीति तथा प्रतिबद्धता हुनेछ । यी योजनालाई सफल बनाउन महŒव राख्ने कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्ने, समयसापेक्ष तालीम दिने र समयअनुसार उत्प्रेरणा दिनेछौं । यसरी कर्मचारीलाई उचित सम्मान गर्छौं । यसो गरे सबै सरोकारवाला सन्तुष्ट हुन्छन् । यसले देशको समृद्धिमा समेत मद्दत गर्छ ।